ध्रुवीय मौसम, यो कस्तो छ? ध्रुव परिदृश्य के हो? यहाँ खोज्नुहोस्! | नेटवर्क मौसम विज्ञान
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ? ध्रुवीय हावापानी कस्तो छ? हामीलाई थाहा छ यो एकदम चिसो छ, जुन ल्यान्डस्केप धेरै वर्षको लागि हिउँले ढाकिएको हुन्छ, तर ... किन त्यसो हो? उनीहरूसँग यस प्रकारको हावापानी भएका स्थानहरूमा रेकर्ड गरिएको न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम के हो?
यस विशेषमा म तपाईंलाई भन्न लागिरहेको छु ध्रुवीय मौसम को बारेमा सबै, सबैभन्दा चिसो पृथ्वीमा छ।
1 ध्रुवीय जलवायु को विशेषताहरु
2 ध्रुवीय जलवायु ग्राफ को उदाहरण
3 यो कहाँ अवस्थित छ?
4 ध्रुवीय जलवायु का प्रकार
5 अन्टार्कटिकामा मौसम
6 आर्कटिकमा मौसम
7 ध्रुवीय वनस्पति
8 ध्रुवीय जीव
ध्रुवीय जलवायु को विशेषताहरु
ध्रुवीय जलवायु लगभग सधैं भएको द्वारा चिनिन्छ ० डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा कम तापक्रम, 93 º ºC (उत्तरी ध्रुवमा) सम्म पुग्नको लागि सक्षम हुनु, सूर्यको किरणहरू स्थलीय सतहको सम्बन्धमा धेरै झुकाव आएकोले। वर्षा अत्यधिक दुर्लभ हुन्छ, सापेक्ष आर्द्रता एकदम कम छ र बतास ठूलो तीव्रता संग s k किमी / घन्टा सम्म पुग्छ, त्यसैले यहाँ बाँच्न लगभग असम्भव छ (यद्यपि, हामी तल हेर्नेछौं, त्यहाँ केही पशु र बोटहरू छन् जुन यस शत्रुतापूर्ण वातावरण अनुकूल गर्न सफल भएका छन्)।
ध्रुवहरूमा सूर्य छ महिनासम्म (वसन्त र गर्मी) को लागि निरन्तर चम्किन्छ। यी महिनाहरू »को नामले चिनिन्छन्ध्रुवीय दिन»। तर अन्य छ (शरद andतु र जाडो) मा यो लुकाइएको छ, त्यसैले यो किन भनेर चिनिन्छ »ध्रुवीय रात"।
ध्रुवीय जलवायु ग्राफ को उदाहरण
स्वालबार्डको क्लाइमोग्राफ, आर्कटिक ग्लेशियल महासागरमा अवस्थित द्वीपसमूह
विश्वको यी क्षेत्रहरूमा ध्रुवीय वातावरण कस्तो छ भन्ने कुराको स्पष्ट धारणाको लागि आउनुहोस्, स्वालबार्डको क्लाइमोग्राफको उदाहरण लिनुहोस् जुन आर्कटिक ग्लेशियल महासागरमा अवस्थित एउटा द्वीपसमूह हो। सबैभन्दा वर्षा भएको महिना अगस्ट हो, जुन २mm मिलिमिटरमा खसेको छ र सबैभन्दा शुष्क मे महिनामा झन्डै १mm मिलिमिटरमा खसेको छ; सबैभन्दा तातो जुन जुन हो, 25--º डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रमको साथ र सबैभन्दा चिसो जनवरी -16ºC.
पृथ्वीमा दुई ठूला चिसो क्षेत्रहरू छन्, बीचमा ººº र º ०º उत्तर र दक्षिण अक्षांश, जुन हुन् पोलो नोर्टे र दक्षिण ध्रुव। पहिलोमा हामी आर्कटिक सर्कल भेट्छौं, र दोस्रोमा अन्टार्कटिक सर्कल। तर अन्य उच्च हिमाली क्षेत्रहरू, जस्तै हिमालयको चुचुरो, एंडीज वा अलास्काको पहाडहरू, ध्रुवीयसँग मिल्दोजुल्दो मौसम छ, त्यसैले ध्रुवीय जलवायुको भौगोलिक प्रतिनिधित्वमा तिनीहरू सामेल हुन्छन्।
ध्रुवीय जलवायु का प्रकार
यद्यपि हामी लाग्न सक्दछौं कि त्यहाँ केवल एक किसिमको ध्रुवीय जलवायु छ, वास्तवमा यो दुईमा विभाजित छ:
टुन्ड्रा: यो एक हो जसमा वनस्पति धेरै बढ्दैन; धेरै जसो छोटो घाँसहरू हुन्। जब हामी ध्रुवीय सर्कलको नजीक जान्छौं, हामी लगभग कुनै वनस्पति बिना परिदृश्यमा आउँछौं। बिभिन्न बोटबिरुवा र पशुहरू यहाँ बस्छन्, जस्तै ध्रुवीय भालु।
बरफ वा हिमनदी: ,,4.700०० मी भन्दा ठुलोसँग मिल्छ। तापमान धेरै कम छ: सँधै ० डिग्री तल।
धेरै, धेरै कम थर्मल मानहरू अन्टार्कटिकामा रेकर्ड गरिएका छन्। टुन्ड्रा जलवायु तटीय क्षेत्रहरू र अन्टार्कटिक प्रायद्वीपमा देखा पर्दछ, र गर्मी महिनाको औसत तापक्रम ० डिग्री हुन्छ, र जाडोमा न्यूनतम--º डिग्री सेल्सियससम्म झर्न सक्छ र अझ बढी। प्रति वर्ष औसत तापमान -१º डिग्री सेल्सियस छ।
यसले धेरै सौर्य विकिरण प्राप्त गर्दैन, र साथै, यसको% ०% सम्म बरफले परिलक्षित हुन्छयसैले सतहलाई तताउन रोकिन्छ। यस कारणले गर्दा, अन्टार्कटिकालाई "पृथ्वीको फ्रिज" भनिन्छ।
आर्कटिकको मौसम धेरै चरम छ, तर अन्टार्कटिकको जस्तो चरम छैन। हिउँद धेरै चिसो छ, तापक्रमको साथ--º डिग्री सेन्टिग्रेडमा झर्न सक्छ, र पनि -68ºC। गर्मीमा, जुन छ देखि दस हप्तासम्म रहन्छ, तापमान १० डिग्री सेन्टिग्रेडमा बढी रमाइलो हुन्छ।
तल्लो क्षेत्रमा गर्मीमा बाहेक आर्द्रता एकदम कम छ। वर्षको बाँकी तापक्रम धेरै चिसो छ, र पानी कडा बाष्पीकरण हुन्छ। त्यस्तै, वर्षा धेरै दुर्लभ छखास गरी जाडोको समयमा।
ध्रुवीय वनस्पति बरु सानो आकारको भएकोले चित्रण गर्छ। हावा ठूलो तीव्रताका साथ चल्छ, त्यसैले सम्भव भएसम्म जमीनको नजिक रहनु आवश्यक छ। तर यो सजिलो छैन, किनकि यो वर्षभरि व्यावहारिक रूपमा चिसो नै रहन्छ। यसैले रूखहरू बाँच्न सकेनन, त्यसैले बोटबिरुवाहरू बस्न सक्ने सानो जग्गाले उपनिवेश स्थापित गरेको छ मोस, लाइचेन्स y स्क्रब.
वनस्पति टुन्ड्रामा मात्र पाउन सकिन्छ, किनकि हिमनदी क्षेत्रको सेतो मरुभूमिमा अवस्था जीवनको लागि उपयुक्त छैन।
ध्रुव जंतुओं को एक अत्यधिक चिसो बाट आफूलाई बचाउन एक तत्काल आवश्यकता द्वारा विशेषता हो। यो प्राप्त गर्नका लागि, तिनीहरू बिभिन्न प्रकारहरू लिएर आएका छन्, उदाहरणका लागि: त्यहाँ केहि बाक्लो कोट हुन्छन् र उपचुन्ने चराहरू पनि जम्मा गर्छन्; त्यहाँ अरूहरू छन् जसले सुरुsहरू वा भूमिगत ग्यालरीहरू निर्माण गर्दछन्, र त्यहाँ कोहीहरू छन् जो प्रवास गर्न रुचाउँछन्।
सबैभन्दा प्रतिनिधि जनावरहरू मध्ये हामीसँग छ ध्रुवीय भालुजुन आर्कटिकमा सबैभन्दा ठूलो स्तनपायी जनावर हो ब्वाँसो, the कस्तूरी गोरु, वा हिउँको खसी। त्यहाँ जलीय जनावरहरू पनि छन्, जस्तो कि केन्द्र, समुद्री ब्वाँसो, वा शार्कहरू जस्तै सोम्निओसस माइक्रोसेफ्लस त्यो ध्रुवीय भालुमा खुवाउँछ।
र यो हामीसँगै सकियो। तपाईंले ध्रुवीय जलवायु जानकारीको बारेमा के सोच्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » ध्रुवीय जलवायु
वेंडी अना गोन्जालेज भन्यो
त्यो उत्तम परिणाम धन्यवाद थियो
Wendy ana gonzalez लाई जवाफ दिनुहोस्
यो अविश्वसनीय हो मैले प्रबन्ध गरेको सबै चीज प्राप्त गर्न म सफल भएँ
सारालाई जवाफ दिनुहोस्
यो राम्रो छ तर यो मैले खोजिरहेको कुरा होइन।
M लाई जवाफ दिनुहोस्
जीवशास्त्र के हो?
हवाईको कोरलहरू ग्लोबल वार्मिंगबाट हराउने जोखिममा छन्